Download Dassault Falcon 7X for FS2004 - Rikoooo
Downloads 12 472
Ny Falcon 7X no flagship raharaha fiaramanidina avy any Dassault. Mety hitondra ny mba 12 mpandeha amin'ny Manafaingana ny ho mạch 0.81 sy ny isan-karazany ny 6000 km. Izy io dia tena raharaham-barotra intercontinental fiaramanidina. Full fonosana for FS2004 tontonana sy VC fanao feo amin'ny Aaron fisolokiana. Model anisan'izany 3D taxi amin'ny 8 seza, lafo vidy anatiny. Tanteraka voarakitra amin'ny lisitra sy ny boky latabatra. Tandremo sao tsy mahita izany!